Upenyu hweKunyengetera neKutendeuka
Mutambo weHwamanda neVhiki reKunyengetera
29 views #Feast of Trumpets #Prayer
Nei Mwari Akatara Mazuva Gumi ekuNyengetera eMutambo weHwamanda?
Mahwendefa ekutanga eMirayiro Gumi akaputswa apo VaIsraeri vakanamata chimhuru chegoridhe. Zvisinei, Mwari akapa mahwendefa echipiri eMirayiro Gumi pazuva regumi romwedzi wechinomwe kune vanhu vakanga vatendeuka. Mwari akatara zuva iri seZuva Rokuyananisira rinova rine vimbiso yekuregererwa kwezvivi, uye akatara zuva rokutanga romwedzi wechinomwe seMutambo weHwamanda.
Maropafadzo Ose Anotanga NeMunyengetero, Nzira Yekutaura nayo NaMwari
Apostora Johani akataura kuti minyengetero yose inova utsi hwezvinonhuwira uye zvokwira pamberi paMwari. Tinofanira kuziva kuti Mweya Mutsvene Ahnsahnghong naMwari Mai vari kunyengeterera vanhu vasina simba, vanotevera zvinhu zvisina maturo, uye vanokundikana kuona maropafadzo okusingaperi ekudenga. Tinofanira kuchengeta mitambo yaMwari nemwoyo inotendeuka, tichivavonga nekuda kwenyasha dzavo.
‘Asi kana tine tariro yechinhu chatisina, tinochimirira nokutsungirira. Saizvozvowo, Mweya anotibatsira mukusava nesimba kwedu. Nokuti hatizivi zvatinofanira kunyengeterera, asi Mweya amene anotinyengeterera nokugomera kusingatsananguriki namashoko.’
Mutambo weHwamanda noKutendeuka
No. of views157